JIGJIGA: Xildhibaanno Xabsiga La Dhigay Iyo Dembiyada Loo Haysto - Jigjiga Online
HomeSomalidaJIGJIGA: Xildhibaanno Xabsiga La Dhigay Iyo Dembiyada Loo Haysto
Jigjiga (JigjigaOnline) – Labo xildhibaan oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka Dawlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa xabsi la dhigay ka dib markii shalay laga qaaday xasanaddii, Sida uu BBC-da u xaqiijiyay Cabdiwali Jaamac Ibraahim oo ah Xeer ilaaliyaha guud ee dowlad Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
Xildhibannada xasaanadda laga qaaday ayaa la kala dhahaa Nasradiin Canab iyo Farxaan Cabdi Maajuun.
Baarlamaanka ayaa horey dhowr goor isugu deyay in xildhibaannadaas xasaanadda laga qaaday balse way suurageliweyday.
Waxaa lagu eedeeyay falal dambiyeedyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kicin bulsho iyo dad lalaayay, sida uu baahiyay telefeshinka deegaanka.
Waxaa soo eedeysay Xeer Ilaaliyaha guud ee Itoobiya, waxaana la filayaa in dacwaddooda lagu qaado maxkamad ku taalla magaalada Addis Ababa, sida uu BBC-da u sheegay Cabdiwali.
Xildhibaannada Dawlad Deegaanka ayaa kulankii kan ka horreeyay ku diiday xasaanad ka qaadidda labadan xildhibaan.
“Wali ma dhicin xildhibaanno xasaanad laga qaadayo oo intaas jiitanta, oo heerkan soo garta oo caddaymo loo radiyo wali ma dhicin,” ayuu yiri Gudoomiyaha baarlamaanka Deegaanka Somaalida Cabdi Maxamed Aadan.
“Guddiga baarlamaanka ee arrimaha sharciyada ayaa waaxda caddaaladda waydiistay caddaymaha eedaymaha loo haysto xildhibaannada, caddaaladdii waxay u soo direen dad khabiiro ah, way hor fariisteen, su’aal walba sidii iyagoo maxkamad jooga ayay uga jawaabeen,” Ayuu intaas ku sii daray Gudoomiye Cabdi.
Madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar iyo masuuliyiin kale ayaa muddo sannad ka badan ku xiran magaalada Addis Ababa, iyaga oo laga qabtay Jigjiga.
Waxaa loo haystaa dhibaatadii ka dhacday Jigjiga afartii Agoosto.
Tan iyo markii xeer ilaaliyaha guud ee Itoobiya uu billaabay in uu dacwado ku soo oogo dad Soomaali ah waxaa la iswaydiinayay sababta maxkamaddaha Jigjiga loo adeegsan la’yahay.
“Dalku dastuur ayuu leeyahay qofka dambi loo haystana in caasimadda lagu maxkamadeeyo wax dhib ah malaha,” ayuu yiri Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika isla markaasna ah bare jaamacadeed.
“Muhiimaddu waa in caddaalad la helo, meesha qofka maxkamadda lagu saarayana dhib malaha xitaa haddii Maqale (caasimadda goboka Tigreega) lagu saarayo,” ayuu intaas ku sii daray Cabdiwahaab.